Induction Yakagadzira Sirivha Yakagadzirwa neRF Induction Yekugadzira Hezefu
musha / Applications / Induction Forging / Induction Kugadzira Simbi Strip
Category: Induction Forging Tags: yekugadzira tambo yesimbi, yekugadzira simbi yemuchadenga induction, yekugadzira simbi yemuchadenga, induction forging, kuiswa kwekugadzira mutsara wesimbi, tambo yesimbi, tambo yesimbi yekuumba
Induction Yakagadzira Sirivha Yakagadzikana neInduction Heating System
Chinangwa Kupisa tambo ye1025 simbi kusvika ku1800 ºF isati yatanga nzira yekugadzira shangu dzemabhiza. Parizvino, mabara anotemwa uye anopiswa muhovhoni inopisa gasi uye ndokuzogadzirwa munhau. Iine induction coil munzvimbo, simbi yacho yaizodyiswa ichienderera kubva mupumburu kuburikidza neiyo induction coil uye mune yekugadzira yekudhinda. Kuti usangane neyakawedzera kugadzirwa chiyero, kupisa kwe13 ″ simbi chikamu kunofanira kuitika mukati megumi masekondi.
Chinyorwa 1025 Simbi yakakumurwa ingangoita 3/4 ″ yakafara uye 1/4 ″ gobvu.
Kupisa 1800 ºF
Zvishandiso DW-HF-60kW kuburitsa yakasimba nyika induction magetsi anosanganisira iyo yekupisa chiteshi ine yakazara capacitance ye0.5 μF.
Maitiro Ameritherm 40 kW kuburitsa solid state induction simba rakawanikwa kuti riite nemhedzisiro mhedzisiro inotevera: Mhedzisiro • 1800 ºF yakasvikwa mumasekondi gumi.
• Chiyero chekugadzira chikamu chimwe chete mumasekonzi mashanu kusvika pagumi chakasangana.
• Mhedzisiro iri pamusoro yakawanikwa kuburikidza nekushandisa makumi matatu neshanu helical style basa coil kuyera 39 1/1 ″ ID uye 2 11/1 ″ OAL.